अदुवाका यस्ता फाईदै-फाईदा तर सावधान ! यस्ता मानिसले भुलेर पनि नाखानुहोला | NewsSudur
अदुवाका यस्ता फाईदै-फाईदा तर सावधान ! यस्ता मानिसले भुलेर पनि नाखानुहोला
अदुवा स्वास्थ्यका लागि निकै फाइदाजनक हुन्छ । यसमा यस्ता न्यूट्रीएन्ट्स हुन्छ, जसले कयौँ स्वास्थ्य समस्याबाट बचाउन मद्दत गर्छ । यसको फाइदालाई हेर्ने हो भने चिकित्सकका अनुसार, दिनहुँ अदुवाको एक टुक्रा आफ्नो आहारमा समावेश गर्नुपर्दछ । यसकारण आज हामी चर्चा गर्दैछौँ, अदुवाको यस्ता ७ फाइदा र यसको साथै यस्ता ३ किसिमका व्यक्तिले भूलेर अदुवाको सेवन गर्नुहुँदैन ।
अदुवाको यी हुन्, ७ फाइदा १-अदुवाखाँदा कोलेस्ट्रोल स्तर कम हुन्छ । यसले मुटुको समस्याबाट बचाउँछ । २-यसमा थर्मोजेनिक एजेन्ट्स हुन्छ । यसले फ्याट बर्निंग प्रोसेस तीव्र हुन्छ । जसकारण वजन चाँडो कम हुन्छ । ३-अदुवामा एन्टी इन्फ्लेमेटरी गुण हुन्छ । यसले जोर्नीको दुखाईबाट बचाउँछ । ४-यसमा फोस्फोरस हुन्छ । यसले दाँतलाई मजबूत राख्छ र गिजाको समस्याबाट पनि बचाउँछ । ५-यसबाट शरीरको इम्यूनिटी बढ्छ । यसले रुघाखोकी जस्ता इन्फेक्शनबाट बचाउँछ । ६-यसमा एन्टीसेप्टिक गुण हुन्छ । यसले त्वचा सम्बन्धि समस्या जस्तै:- डन्डीफोर हुनबाट बचाउँछ । ७-यसमा आयरन हुन्छ । यसले रगतको कमी(एनीमिया) बाट बचाउँछ ।
यस्ता ३ किसिमले व्यक्तिले खानुहुँदैन, १-जसलाई पीरियड्स समस्या छ । अदुवा गरम प्रकृतीको हुन्छ । जो व्यक्तिलाई पीरियड्स समस्या हुन्छ, उनीहरूले यसको सेवन गर्नुहुँदैन । यसबाट समस्या बढ्न सक्छ । २-जसलाई एसिडिटीको समस्या छ, यसलाई बढी खाँदा एसिडको स्तर बढ्न सक्छ । यसकारण एसिडिटी जस्ता पेटको समस्या हुँदा यसको सेवन गर्नुहुँदैन । ३-जसलाई डायबिटीज छ, अधिक अदुवा खाँदा ब्लड शुगर लेभल लो हुनसक्छ । यसकारण डायबिटीजको रोगीले यसलाई खानुहुँदैन ।